Global Voices teny Malagasy » Indray Andro Izay, Naka an-keriny Ahy Ry Zareo : Sarimiaina Miampanga Ny Fakàna Vehivavy an-keriny ao Kirghizistan Mba ho Vadiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Indray Andro Izay, Naka an-keriny Ahy Ry Zareo : Sarimiaina Miampanga Ny Fakàna Vehivavy an-keriny ao Kirghizistan Mba ho Vadiana
Voadika ny 19 Avrily 2017 8:44 GMT 1	 · Mpanoratra Akhal-Tech Collective Nandika (fr) i Edwige Dugas, imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Pikantsarin'ny iray amin'ireo sarimiaina dimy ‘Indray Andro Izay, Naka an-keriny Ahy Ry Zareo’ noforonin'i Tatiana Zelenskaïa, Kirghiz mpanakanto sy i Egor Tankov, mpanatontosa.
Sarotra ny hahazo antontanisa tena marina, saingy asehon'ny fandalinana iray  tanisaina matetika fa efa ho ny ampahatelon'ireo tokantrano naorina tao Kirghizistan no vokatry ny fakàna an-keriny tsy nifanekena.
Taorian'ny nirodanan'ny Firaisana Sovietika tamin'ny 1991, dia , lasa zavatra fanao mahazatra ao amin'ilay firenena ny fakàna an-keriny mba hovadiana, na ‘Ala Kachuu’ ; heverin'ny fikambanana mpiaro ny zo ao Kirghizistan ho 8.000 eo isantaona amin'ireo fakàna an-keriny tahaka izany no mitranga.
Tsy mbola misy mangirana ny ho fitsaharan'ny firongatr'ireny ‘fakàna an-keriny ny vehivavy hovadiana’ ireny — izay notsipihan'ireo mpikaroka fa tsy idiran'ny resaka fomban-drazana fa heloka bevava amin'ny endriny maoderina fotsiny, raiki-tampisaka ao anatin'ny toedraharaha sosialy sy toekarena manokan'io firenena ao Azia Afovoany io.
Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsy lasa, nanamafy ny ezaka ataony ireo fiarahamonim-pirenena sy ny mpikambana sasany ao amin'ny governemanta mba hiadiana amin'io areti-mandoza io, izay mazàna no misy idiran'ny fanolànana ireo niharany sy ny fisitrahana tsimatimanota ho an'ireo nanatanteraka izany.
Taona dimy lasa izay, ny Global Voices dia nametraka tety anaty aterineto  andiany iray aminà lahatsary novokarin'ny fikambanana iray ao an-toerana miaro ny zon'ny vehivavy sy mampiroborobo ny fampiharana ny lalàna iray momba ny fakàna an-keriny. Tsotra ny hafatra entin'ireny lahatsary ireny : voararan'ny lalàna ny fakàna an-keriny vehivavy mba hovadiana, ary araka izany, tokony hotoriana sy hosaziana.
Amin'izao fotoana izao, mpivady mpanakanto sy mpanatontosa sarimiaina ao Bichkek, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena, no mamelona indray ny adihevitra momba ny fakàna an-keriny ireo vehivavy hovadiana, nanozongozona ireo tambajotra sosialy ao amin'ny firenena.
Araka ny anipihan'ilay mpanakanto azy, Tatiana Zelenskaïa, sy ny vadiny, Ego Tankov, mpanatontosa, dia avy amin'ny tantara marina no nipoiran'ireny lahatsary ireny, na dia novàna aza ny anarana noho ny fangatahan'ireo mpandray anjara mba ho fiarovana ny mombamomba azy ireo.
Ny tantaran'i Nazik
Ny voalohany amin'ireo sarimiaina, miaraka amin'ny soratra amin'ny teny Rosiana sy fandikàna ho amin'ny teny kirghizy, dia miresaka ny fakàna an-keriny ankizivavy iray nomena ny anarana Nazik. Nivoaka tamin'ny volana lasa, tamin'ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy.
Tsy ahitàna ireo singa mahatsiravin'ny fakàna an-keriny raiki-tampisaka, hoe sintonin'ireo mpaka azy an-keriny ho any anaty fiara ilay zazavavy, mikiakiaka sy mikofokofoka. Fa toy ny manome ireo fitapitaka isankarazany, fivadihana ary nenina norarian'ireny tranga ireny ary manohintohina ny fisiana sy ny fiainam-pianakaviana.
Vita sonia ny hoavin'i Nazik tamin'ny fotoana nahatongavan'ny naman'ny reniny tonga namangy azy ireo tao an-trano. Niaraka taminy ny zanany lahy Abay.
“Azo lazaina ho toy ny nanery ara-batana” azy handao ny trano ny anadahy sy ny renin'i Nazik, ka handeha hijery sarimihetsika miaraka amin'i Abay, izay efa fantany hatry ny fony fahazazàny. Teny aminy tsy nisy na finday, na vola raha nivoaka ny trano izy.
Vantany vao tafiditra tao anaty fiara iray izay noheverina ho fiarakaretsaka ry zareo, nesorin'ilay mpamily ny marika teo ambony tafo : tsy mpamily fiarakaretsaka io fa naman'i Abay tonga hanampy azy haka an-keriny an'i Nazik.
Tsy nizotra ho any amin'ny trano fijerena sarimihetsika ny dian-dry zareo, fa nankany amin'ny tranon'ny fianakavian'i Abay, izay efa nisy lanonana fampakarambady niandry azy ireo. Nangataka ny ho afaka hiresaka amin'ny ray aman-dreniny i Nazik, saingy ny anadahiny, izay tonga taoriana kelin'izay, niaraka tamin'ny fianakaviany, no niteny tamin'ny anaran'izy ireo:
Nazik, nanapaka hevitra i dada fa tokony hijanona aty ianao. Lehilahy tsara i Abay ary ho vady mendrika. Midika fahasambarana ho an'ny tovovavy iray ny fanambadiana!
Ireo teny ireo — izay manamafy fa nanaiky ilay hetsika ny loham-pianakaviana — dia nisy fiantraikany goavana tamin'i Nazik. Hany ka, rehefa mba niantso azy ny reniny ary nangataka an-dranomaso taminy, raha tiany hofoanana ilay fampakarambady ary handeha hiverina hody, dia nanda izy sady nanapaka hevitra ny hijanona niaraka tamin'ny Abay sy ny fianakaviany.
Saingy nandainga ny anadahin'i Nazik. Tsy fantatry ny rain'i Nazik hoe io andro io no ho alaina an-keriny ny zanany vavy, ary latsa-katezerana mivaivay izy rehefa fantany ny zavatra nitranga. Efa tara loatra, satria efa nisy “mollah” iray nanamasina sahady ilay fampakarambady.
Taty aoriana ireo mpanatrika vao nahalàla fa zavatra nomanin'ny renin'i Nazik ilay fakàna an-keriny, ny reniny izay tsy nankasitraka ilay zazalahy nandrian'ny fon'i Nazik tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana rehefa nahatsapa ny hadisoana goavana vitany izy, niantso ny fianakavian'i Abay mba hamela an'i Nazik ho afaka miala amin'io toedraharaha io. Raiki-tahotra momba izay ho fitsaratsaram-poana hanjo azy raha toa ka foana ilay fanambadiana, nandà i Nazik.
“Tsy fianakaviana sambatra izahay”, hoy i Nazik mitantara any amin'ny fiafaran'ilay lahatsary. “Taona efatra taty aoriana, noroahan’ [ny fianakavian'i Abay] hiala ny trano niaraka tamin'ny zanako aho.”
Ny tantaran'i Elzada
Fony narary mafy ny rainy no nitranga ny fakàna an-keriny an'i Elzada — fotoana iray sarotra teo amin'ny fiainany, nitrangan'ny fakàna an-keriny ny zandriny vavy mba ho vadiana. Mifanohitra amin'ny nanjo an'i Nazik, toa tsy nandray anjara tamin'ilay fakàna an-keriny ny fianakavian'i Elzada, fa naman'ny anadahiny ilay ho vadiny.
Nolaviny aloha ny hivady amin'ny Talgat, lehilahy kamo izay ny hany mba ataony dia ny mijery fahitalavitra, mitorevaka eo ambony sezalava.
“Noho ny zaza no mbola maha-mpivady anay”, hoy i Elzada mibaboka amin'izao fotoana izao. “Izaho no mitady vola sy mandray ny fanapahankevitra rehetra. Tsy vitan'ny hoe tsy tiako izy, fa ambonin'izay, tsy misy hajany amiko izy na kely aza.”
Eto koa, noho ny tahotra ny fitsaratsaram-poana no naneken'i Elzada ny tokantranony. Tany am-piandohana, nanambitamby azy hanaiky ny zavamisy ny fianakavian-dralehilahy, talohan'ny nidirana tamin'ny fampitahorana.
Hoy ny iray tamin'ireo lehilahy avy amin'ilay fianakavian'ny vadiny :
Mety efa tsy virijiny itsony ianao ary tsy tianao ho fantatry ny rehetra izany.
Takatr'i Elzada fa mety ho lasibatry ny honohono mahatsiravina izy raha toa ka nandà ilay fampakarambady. Saingy moa ve izany ratsy lavitra noho ny fiarahana miaina aminà lehilahy iray izay tsy tiany akory ?
Ny tantaran'i Elzada, izay ijanonan'ny vehivavy hiaina miaraka amin'ny mpamiravira azy, no tena mahasolo tena sy mahalaza ny tranganà fakàna an-keriny ireo vehivavy hovadiana ao Kirghizistan. Arafitra be amin'ny alàlan'ny fitaratry ny nenina sy ny fandeferana ao anatin'ilay sarimiainan'i Zelenskaïa sy Tankov, io angamba, amin'ireo tantara dimy nozohiana, no tsy isalasalàna fa tena mahaontsa indrindra.
Ny tantaran'i Aliya
Tantaran'ny fakàna an-keriny tsy nahomby ny an'i Aliya, singy mampiseho hoe mandritry ny “fifampiraharahàna” amin'ilay “manam-paniriana” dia mety ho voahozongozona ny hoavy.
Taminà trano iray fisotroana kafe, nisy lehilahy nanasa i Aliya sy ny rahavaviny. Nilaza ny iray tamin'izy ireo fa mahafatifaty azy i Aliya, ary nanam-pikasana haka azy an-keriny sy hampakatra azy ho vadiny izy.
Nisafidy ny haneho tamin-pahasahiana ny heviny i Aliya mba handresy lahatra ilay nihevitra ny ho vadiny. Saingy raha tokony ho naneho firaisankina, toa nahatsiaro ho sanganehana tanteraka ilay rahavaviny, ary nahafaly iretsy lehilahy izay tsy fihetsehany izay. Rehefa avy nifoaka sigara iray tany ivelany, dia nilaza ry zareo fa ilay rahavaviny “tsy dia ratsy loatra” no ho alain'izy ireo an-keriny fa tsy i Aliya be fanoherana.
Rehefa nahatsapa tampoka hoe ilay tsy nampaninona azy loatra raha mbola ny rahavaviny ihany no anton-dresaka no lasa raharaha momba azy ankehitriny, nitalaho tamin'izy ireo ilay rahavavin'i Aliya ny tsy hakàna an-keriny azy, tamin'ny filazana fa efa voatolotra ho anà lehilahy hafa izy. Sanganehana tanteraka ireto lehilahy nony farany ka niala namela azy mirahavav, ary azo sainina fa nanomboka nikarakara fakàna an-keriny vehivavy hafa…
Ny tantaran'i Begaim
Ny tantaran'i Begaim no hany tokana miaty tranganà herisetra ara-nofo tafahoatra. Any am-piandohan'ny lahatsary, tovovavy iray mivahiny any Londona i Begaim , noho ny asany ho anà fikambanana iray mpiaro zon'olombelona.
Teny ambony fiaramanidina, nandà tsy handray silogaoma misy solila natolotry ny mpanamory ara-barotra izy.
Fantatra avy eo ny antony “ankahalàny” ny siligaoma misy solila : noho ny fofony mifangaro amin'ny fofonain'ilay lehilahy nanolana azy taorian'ny fakàna an-keriny azy.
Nandositra i Begaim satria nolavin'ny ray sy reniny ny fanambadiana; tonga naka azy ny rainy ary nidaroka an'ilay lehilahy nanao an-keriny azy mihitsy aza.
Nandritry ny taona nanaraka io, tsy nahavita nivoaka ny trano aho satria mangovitra isaky ny mihaona [amin'olona]. Manonofy ratsy aho no sady tsy mahita tory. Hatramin'izao, mbola manonofy iny alina mahatsiravina iny aho indraindray, ireo tànany maloto sy ny fofon'ilay siligaoma misy solila.
Ny tantaran'i Nargiza
Nenitoany nitàna toeran'ny mpanelanelana no nikaraka ny fakàna an-keriny an'i Nargiza ary dia nizotra toy ny efa nahazatra ihany : nentina nankany amin'ny tranon'ilay fianakaviana tsy maintsy hiarahany miaina izy. Noteren'ireo fianakavian-dralehilahy hanaiky ilay fampakarambady izy, nampiasaina ireo teny fankaherezana sy fampitahorana fahita amin'ny tantara hafa. Fa rehefa injay handrakotra an-terisetra azy ny voaly fotsy ry zareo, nanohitra izy.
Fantatry ny reniny ny zavatra nitranga raha vao niantgso azy avy any an-tranon'ireto ho rafozany i Nargiza. Nitady izay handresena lahatra azy izy aloha mba hijanonany. Saingy nisisika hatrany i Nargiza ary nandrahona ny hiantso polisy. Lalàna iray vao nampidirina vao haingana no manenjika ireo mpaka an-keriny hisazy dimy ka hatramin'ny fola taona an-tranomaizina, hoy izy tamin-dreniny tao anaty telefaona, raha iretsy mpaka an-keriny kosa mihaino ny resaka tamim-pihorohoroana fatratra.
Nilefitra ihany nony farany ilay nenitoa sy ireto fianakaviana. ‘Nargiza’, ilay hany olona tokana nofaritan'i Zelenskaïa ho nilaza ny tena anarany, dia miasa manao mpanolotra fandaharana aminà fahitalavi-panjakana kirghiz amin'izao fotoana izao.
Guljan (havanana) no tovovavy niaingàn'ny srimiaina momba an'i Nargiza (ankavia). Fanafangaroana nozarain'i Tatiana Zelenskaïa ao amin'ny Facebook.
Ny tantaran'i Guljan (‘Nargiza’) no andiany farany amin'ireo andiany dimy. Hazavain'i Zelenskaïa ao anaty lahatsoratra iray  ho an'ny Kloop.kg ny antony namivoaka farany azy tao anatin'ilay andiany :
Tiako haseho any am-parany ilay izy satria heveriko fa io no tantara manandanja indrindra amin'izy rehetra.
Tiako ny tovovay rehetra mba handray ireo torohevitra omen'ilay lahatsary azy ireo. [Tiako ry zareo] hahafantatra izay azony atao sy ny fomba hitakiany ny zony, sy hoe azon'izy ireo ampitahorina [ireo mpaka an-kerony] ary entina any amin'ny polisy sy henjehina noho ny heloka bevava
Nitehaka ireo sarimiaina ireo ny nakamaroan'ireo mpampiaa tambajotra sosialy ao Kirghizistan, saingy tamin-katezerana sy fandàvana kosa no nanehoan'ny sasany hevitra.
Araka izay napetrany ho an'ny Global Voices, antenain'i Zelenskaïa ny haneken'ny fantsom-pahitalavi-pirenena kirghize handefa ireny sarimiaina ireny mba handona olona betsaka kokoa any amin'ny faritany sy ireo tanàna kely isankarazany, izay matetika no itrangan'ny tranganà fakàna an-keriny vehivavy hovadiana, ary tsy dia misy loatra ny fahafahana miditra ami'ny aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/19/97935/
 fandalinana iray: http://faculty.philau.edu/kleinbachr/bride_ki.htm
 lasa zavatra fanao mahazatra ao amin'ilay firenena : http://www.rferl.org/a/bride-kidnapping-in-kyrgyzstan/25403604.html
 dia nametraka tety anaty aterineto: https://globalvoices.org/2012/06/01/kyrgyzstan-civic-initiatives-seek-to-tackle-bride-kidnapping/
 lahatsoratra iray: https://kloop.kg/blog/2017/03/30/odnazhdy-menya-ukrali-istoriya-nargizy/